Soosaarayaasha Ugu Xunxun XPE iyo Warshad | Yilibao
Waxyaabaha aan sunta lahayn iyo kuwa bey'adda ku habboon: XPE Puzzle Mat wuxuu ka samaysan yahay xumbada XPE taas oo badbaado u leh, bey'ada u fiican oo aan sun ahayn.
1. Wax sun ah oo aan bey'adda u fiicnayn: XPE Puzzle Mat wuxuu ka samaysan yahay xumbada XPE taas oo badbaado u leh, bey'ada u fiican oo aan sun ahayn.
2. Difaac: XPE Puzzle Puus waa mid jilicsan oo aan simbiriirixan karin, dhallaanka ayaa ku ciyaari kara kuna dul gurguurta si ammaan ah.
3. Tacliin: Waxaa jira xarfaha alifbeetada, xayawaanka, tirooyinka iwm naqshadaha oo lagu daabacay sariirta. Naqshado midabbo badan oo qurux badan oo salka ku yaal. Kuwani waxay ku fiican yihiin waxbarashada ilmaha.
4. Si fudud loo nadiifiyo: XPE matxanta xujo ma leh biyo. Waxaad ku nadiifin kartaa maro qoyan, way fududahay in la nadiifiyo.
5. Adkaysi badan oo ka xoog badan: XPE matxafka xujada ayaa laga sameeyaa xumbada XPE taas oo ka sii cimri dheer kana xoog badan tan EPE ee xujada.
Guud ahaan macaamiisha u janjeedha, waana himiladayada ugu dambeysa ee ah inaan noqonin oo keliya bixiyaha ugu kalsoonida badan, kalsoonida iyo runta leh, laakiin sidoo kale lammaanaha macaamiisheena ee Bixinta Cusub ee Shiinaha Fudud Warshad Nadiif ah Nakhshadeyn cusub oo waara XPE EPE Floor Mats Xumbo Dabaqyada Mats Xujo. Xumbo Foor Mats, Waxaan aaminsanahay inaad ku farxi doontid qiimaha iibka dhabta ah, alaabada tayada sare leh iyo xalalka iyo gaarsiinta degdega ah. Waxaan si kal iyo laab ah u rajeynaynaa inaad na siiso rajo aan ku siino oo aan noqonno lammaanahaaga ugu fiican!
Waxaan sii wadnaa hagaajinta iyo hagaajinta alaabteenna iyo dayactirka. Isla mar ahaantaana, waxaan ka helnaa shaqada si firfircoon si aan u sameeyno cilmi baaris iyo horumar 100% Warshad asal ah Shiinaha jilicsan biyo aan sun ahayn oo lagu ciyaaro Mat Kaartoon weyn XPE Puzzle Play Mat, Waxaan si diirran u soo dhawaynaynaa PALS dhammaan qaybaha nolosha si loo ugaadhsado iskaashiga oo waxay soosaaraan berri aad ufiican oo aad uqurux badan.
100% Warshadda Asalka ah ee Shiinaha Xumbo Dabaqa Laab Ilmaha Lagu Ciyaarayo iyo Qiimaha Ciyaarta Cunugga Ciyaarta ah, Iyada oo ku saleysan mabda'a hagiddayada ee tayada ayaa fure u ah horumarka, waxaan si isdaba joog ah ugu dadaalnaa inaan ka badino macaamiishayada rajadooda. Sidan oo kale, waxaan si kal iyo laab ah ugu casumeynaa dhammaan shirkadaha daneynaya inay nala soo xiriiraan iskaashiga mustaqbalka, Waxaan soo dhoweyneynaa macaamiil hore iyo kuwa cusubba inay gacmaha isqabsadaan si ay u sahamiyaan una horumariyaan; Wixii macluumaad dheeraad ah, waa inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto. Mahadsanid. Qalabka horumarsan, xakamaynta tayada adag, adeegga jihaynta macaamiisha, soo koobida hindisaha iyo hagaajinta cilladaha iyo khibradaha warshadeed ee ballaadhan ayaa noo oggolaanaya inaan dammaanad ka qaadno qanacsanaanta macaamil badan iyo sumcad taas oo, taas beddelkeeda, noo keenaysa amarro iyo faa'iidooyin badan. Haddii aad xiisaynayso mid ka mid ah alaabteenna, xusuusnow inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto. Weydiinta ama booqashada shirkaddayada si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan ku bilowno guul-wadaag iyo iskaashi saaxiibtinimo. Waxaad ka arki kartaa faahfaahin dheeraad ah boggayaga internetka.
Hore: Slide yar
Xiga: 3D Waraaq
Maqaarka Xujada Ilmaha
Caruurta Xujo La Yaab Leh
XPE Waxyaabaha lagu ciyaaro Mat